'नेपालको सेयर बजार सिंहदरबारको वरिपरि मात्रै छ' | GNN Nepal GNN Nepal 'नेपालको सेयर बजार सिंहदरबारको वरिपरि मात्रै छ' | GNN Nepal
सेयर बजार लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा चल्छ ।
काठमाडौं। कोरोना, निषेधाज्ञा अनि फुर्सदिला युवा। सेयर मार्केटलाई रेकर्ड ब्रेक गर्न यति कारण भए पुग्यो । अहिले घरमा बसेका शिक्षकदेखी विद्यार्थिसम्म, पढेलेखेका हाकिमदेखि , गृहणीसम्मको इन्ट्रेस्टको विषय हो ‘सेयर बजार।’ पछिल्लो समय सेयरमा लगानी गर्नेहरुको सङ्ख्या ह्वात्तै बढी रहेको छ। अझ अनलाइनमार्फत घरै बसिबसी थोरै रकमले पनि कारोबार गर्ने मिल्ने भएपछि त नयाँ लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् ।
सेयर बजारमा हलचल त्यति बेला हुन्छ, जुन बेला ‘बजार ह्वात्तै घट्छ वा ह्वात्तै बढ्छ।’ अहिले नेपालमा बजारले निरन्तर रेकर्ड ब्रेक गर्दै छ । नेप्से परिसूचकले २९ सयको विन्दु पार गर्ने तरखरमा छ भने कारोबार रकम पनि १७ अर्ब भन्दा बढीको भैसकेको तथ्याङ्क ताजै छ ।
परम्परागत रूपमा ब्रोकर कार्यालयमा पुगेर लाइन बसेर, चिच्याएपछि मात्रै सेयर खरिद बिक्री गर्ने सकिन्थ्यो। तर हाल टिएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागु भएपश्चात् कारोबार गर्न सहज भएको छ । जसको फलस्वरूप आजका दिनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले कारोबार अनलाइन मार्फत घरै बसेर गर्छन् ।
गत वर्षसम्म सेयर बजार सम्बन्धमा ज्ञान केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै हुने गर्दथ्यो । तर कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा गएपछि दोब्बरभन्दा बढीले ‘डिम्याट, मेरो सेयर र टीएमएस’ सेवा लिएको नेप्सेले जनाएको छ ।समग्रमा हाल सेयर बजारमा युवाहरूको क्रेज बढी रहेको देखिन्छ। तर सामान्य बजारबारे जानकार नहुँदा सोजा लगानीकर्ता फसिरहेको खबर पनि बाहिरिएको छ ।
त्यसैका सन्दर्भमा पुँजी बजार संघको नेतृत्व लिने पहिलो महिला (नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ) कि अध्यक्ष राधा पोखरेलसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
नेपालको सन्दर्भमा सेयर भनेको के हो ?
कम्पनीको एक हिस्सा नै सेयर बजार हो । सेयर दुई किसिमका हुन्छन्। साधारण सेयर अर्को अग्राधिकार सेयर ।
साधारण सेयर भनेको कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार सेयर धनीलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गर्ने गरी जारी गरिएको धितो पत्र हो । साधारण सेयर कुनै एक कम्पनीले सर्वसाधारणबाट उठाउँछ । जसमा एक कित्ता सेयरको मूल्य १०० हुन्छ ।
कम्पनीले निश्चित लाभ हासिल गरेपछि त्यसको अंश सेयर होल्डरलाई दिनुपर्छ जुन अग्राधिकार सेयर हो । कम्पनीले नाफा नगरे पनि यस्ता सेयर धनीहरूले निश्चित दरमा लाभांश पाउने व्यवस्था हुन्छ।
कम्पनीले आर्जन गरेको सञ्चित मुनाफाबाट साधारण सेयर धनीलाई भन्दा पनि पहिला तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गर्ने गरी जारी गरिएको अग्राधिकार सेयर हो ।
तथापि, वि.सं २०३३ सालमा औपचारिक रूपमा सेयर बजार सुरु भएको हो । अहिले चार दशकसम्म बितिसक्दा पनि हामीले चाहे अनुकूलको वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप चाहिँ हुन सकेको छैन । नेपालको पुँजी बजार अझै पनि पूर्ण विकसित हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा युवामा क्रेज बढ्नुको कारण के हो ?
पहिलो कुरा अन्य सेक्टरमा लगानी गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ । विशेष गरी युवाहरू पढिरहेका हुन्छन् । ९ बजेदेखी ६ बजेको जागिर गर्न पाइरहेको हुँदैनन् । तर सेयर बजार ‘पार्ट टाइम’ जस्तो हो । सेयर बजारमा काम गर्नका लागी जनशक्ति र समय धेरै चाहिँदैन । मोबाइल अथवा ल्यापटप र थोरै पैसा भए भयो ।
अनि फेरी युवावस्थामा कमाउन नसके पनि सञ्चित गर्न सबैलाई मन लाग्छ । सेयर बजारमा १०० रुपैयाँमध्ये ५० खर्च खर्च गरेर लगानी गर्ने सकिने पनि भयो ।
संगसंगै यो बेला सिक्ने बुझ्ने अवस्था हो । तर युवाले अन्य क्षेत्रमा काम पाइरहेका छैनन् । फुर्सदमा बसिरहेका छन् । ठुलो व्यापार गर्न पनि सक्दैनन् । सेयर बजारमा थोरै समय दिएर बाँकी समय अन्य काम गर्दा पनि भयो । त्यस कारण युवाहरू सेयरमा आकर्षण बढाइरहेका छन् ।
सेयर बजारमा पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा कतिको फरक छ ?
समयसंगै प्रविधिहरू पनि परिवर्तन, विकास हुँदै जाने हो । आजभन्दा ४ वर्ष अघि हामी घरबाटै कारोबार गर्थ्यौ । ब्रोकरको सहारा लिनुपर्थ्यो । हाम्रो हातबाट केही काम हुँदैन थियो । कारोबार प्रणाली व्यवस्थित थिएन ।
अझ त्यो भन्दा अघि जाने हो भने डिम्याट थिएन । हातमा कागज बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो ।
तर समय संगसंगै प्रविधिहरू चेन्ज हुँदै आएको छ। सेयरका समस्याहरू सुल्झिदैं गएका छन्। अहिले अनलाइनबाट एकै छिनमा कारोबार गर्न सकिन्छ।
पहिले र अहिलेको सेयर बजार त आकाश जमिनको फरक भन्छु म ।
सेयर बजारमा पूर्ण विकास हुन नसक्नुको कारण बताइदिनुस् न ?
पछिल्लो समय धितो पत्र बोर्डले बजार पुर्वाधारमा केही सुधार ल्याएको छ । तैपनि, पुँजी बजारमा नीतिगत प्राविधिक, भौतिक जस्ता पाटाहरू अझै धेरै सुधार्न बाँकी छ ।
सेयर साक्षरताको कमीले गर्दा पुँजी भएका तथा सेयरमा प्रवेश गर्न चाहनेहरू बजार छिर्न हच्किनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ लगानीकर्ता बजारमा आउन चाहन्छन्, जनचेतना छैन । पुँजी बजारको विकास र विस्तार भएको छैन ।
अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सेयर बजार सिंहदरबारको वरिपरि मात्रै छ ।
अस्ति भर्खरै म क्लास लिन संतुगत पुगेको थिए । त्यहाँ बजारको ज्ञान र प्राविधिक सुविधा दुवै छैन । त्यहाँका मानिसहरू एक घण्टाको यात्रा गरेर डिम्याट खोल्न पुतलीसडक आउनुपर्ने अवस्था छ । यो उदाहरणले दर्साउँछ “नेपाली पुँजी बजार अझै कति विस्तार हुन बाँकी छ ।”
देशका विकट र सहरी क्षेत्रबाट टाढाका जनतालाई यसबारे ज्ञानै छैन । सम्बन्धित निकायहरूले हामीले उठाएका मागहरू सुनेका छैनन् । ती निकायहरूले आफ्नो ठाउँबाट लगाव दिएर सेयरका समस्या नबुझी दिँदा नेपालको पुँजी बजार अलिकति अस्थिर रहेको छ ।
ज्ञान बढाउन सकेमा सेयर बजारलाई प्रोफेसन बनाउन सकिन्छ ?
सकिन्छ । हामीसंग अन्य क्षेत्रका डाक्टरदेखि पाइलटसम्म सम्पर्कमा हुनहुन्छ । उहाँहरूले पुँजी बजार र आफ्नो पेसालाई सँगै लगेका छन् ।
पहिले कागज बोकेर हिँड्नुपर्थ्यो अहिले डिम्याट छ । हामी जहाँ जुन कुनामा बसेर पनि कारोबार गर्न सक्छौँ । अब भोलि गएर ‘ब्रोकर लेस’ होला । प्रविधिमा सुधार होला । अझ विदेशको जस्तो २४ घण्टा कारोबार हुने हो भने अवश्य सेयर बजारलाई नेपालीले एक पेसा बनाउन सक्छन् ।
तर, यसो हुन नियामक निकायले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। आजै पनि हेर्ने हो भने धेरै समस्या छ, टिएमएस राम्रोसंग चलेको छैन । सीडीएसमा छिटो काम गर्न सकिदैंन । ‘आइपिओ’ खुल्यो कारोबारको भोलीपल्ट राफसाफका लागि बेच्नेले इडिआइस गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सकिदैंन । राती १२ बजे ‘अर्लाम’ राखेर इडिआइस गर्नुपर्छ ।
यस्ता-यस्ता समस्याले गर्दा नै नेपाली पुँजी बजार पछाडि परेको हो ।
सेयर बजारमा आइपिओबाट भन्दा पनि सिधै प्रवेश गर्ने छन् नि ?
अहिले बढ्दो नेपाली बजारमा नयाँ पुराना लगानीकर्ता पनि बढेको बढै छन् । नयाँ अवसरको खोजी गर्ने प्रक्रिया र नयाँ प्रविधिको विकास पनि बढ्दो छ। पछिल्लो समय निरन्तर बढेपछि सेयर बजारमा हाम फाल्ने गरेको पाइएको छ ।
विशेषगरि कोभिडका समयमा मानिसहरूले बाहिर लगानी गर्न नपाउँदा सिधै सेयरलाई पैसा कमाउने एक जरिया बनाएका छन् । अहिले मानिसहरू मिडियादेखि युट्युब र कक्षाहरू नै लिएर पनि सेयर बजारबारे थाहा पाउन थालेका छन् ।
नयाँ लगानीकर्ताले सिक्ने भनेको आइपीओबाट हो । तर उनीहरूले सेकेण्डरी मार्केटमा सर्किट लागिरहेको कम्पनी तथा इन्डेक्स हेरेर लगानी गर्न थालेका छन्, जुन एकदमै जोखिम हो ।
हामीले सुरुमा पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनपर्ने हुन्छ। जस्तो देशको आर्थिक परिदृश्यदेखि, सरकार र नियामक निकायले लिने नीति, बजारको विगतको प्रवृत्ति, कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपात, तरलताले पनि बजार थपघट हुन सक्छ ।
त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताले सेयर किनिसकेपछि होइन, किन्नु भन्दा अगाडि अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्छ । बढेको बजारलाई मात्रै हेरेर लगानी गर्नु भएन ।
बियर र बुलीस ट्रेन्ड के हो ?
जहिले पनि सेयर बजारमा बियर र बुलीस ट्रेन्ड भन्ने हुन्छ ।
चार वर्षसम्म नेपालमा बियरिस ट्रेन्ड चलेको थियो । अर्थात् बजार घटेको थियो । १८ सय विन्दुमा रहेको नेप्से हजारमा पुगेको थियो । यो घटबढको ट्रेन्ड चार वर्षबिच अन्तरको ‘साइकल’ रहेछ । त्यसैलाई हेरेर हामीले बुलिस ट्रेन्ड सुरु भएको भनेका हौं । लगानीकर्ताको मानसिकता यही बनेको छ ।
पोहोरबाट बजार बढ्यो । १९ सय विन्दुमा पुग्दा धेरैलाई बजार प्रवेश गर्न ढिला भइसक्यो भन्ने परेको थियो । बढ्दो बजारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै लग्यो र अहिले हामी २९ सयको विन्दुमा छौं ।
यस्तो घटबढमा देशको अवस्थादेखि तरलतासम्मले असर पारेको छ ।
उसो भए अबको चार वर्षमा बजार बढेर पाँच हजार विन्दु कट्ला ?
बजार बढेपछि घट्छ, घटेपछि बढ्छ ।
बजारलाई यसै यहाँ पुग्छ, त्यहाँ पुग्छ भनेर भन्न सकिदैंन। बजार बढ्दै जाँदा उत्साहित भएर ५/६ हजार विन्दुमा पुग्छ पनि भनिन्छ। अनि घट्दा २ हजारमा पुग्छ पनि भनिन्छ। त्यसले गर्दा बजार यति नै पुग्छ, भन्ने अन्दाज सेयर बादशाह ‘वारेन बफेट’ले पनि गर्न सक्दैन ।
युवालाई बजारमा आउनका टिप्सहरू केके छन् ?
युवाहरूले खर्च गर्ने रकम केही झिकेर लगानी गर्न सक्छन् । बजार आउनुपूर्व हचुवाको भरमा भन्दापनि जानकारहरूसँग एकदमै बुझेर प्रवेश गर्न पर्‍यो। बजारको अवस्थादेखि ‘कुन ट्रेन्डमा चलिरहेको छ’ भन्नेबारे बुझ्न पर्‍यो ।
नयाँले लगानी गर्ने रकम भाग लगाउँदा राम्रो । अर्थात् एक लाख छ भने आज २५ हजारको किन्ने । भोलि २५ हजारको । किनभने एकैचोटी लगानी गर्दा बजार घट्यो भने ५० प्रतिशत घाटा हुन्छ ।
यो अवस्था भनेको सिक्ने बुझ्ने हो । त्यसले गर्दा सकिन्छ भने पहिलाआइपिओबाट लगानी गरौं । हैन सेकेण्डरी बजारमा छिर्छु भन्नु हुन्छ भने ‘एकदमै जोखिम कम भएका कम्पनी, सेक्टर छानेर लगानी गरौं ।’
अन्तिममा, सेयर बजारमा महिलाको सम्भावना कस्तो छ ?
सेयर बजार भनेकै महिलाको लागी भन्छु म । घरको कामसँगै महिलाले सेयर बजारमा पैसा भित्र्याउन सक्यो भने श्रीमानको अगाडि सानोतिनो कुरामा पनि हात फैलाउनु परेन । अन्य काममा पनि निपुर्ण हुँदै गइन्छ। काम गर्दै घरपरिवारलाई समय दिन सकिन्छ ।
अत: महिला बजारमा आए पनि आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न सक्छन् ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकि अध्यक्ष राधा पोखरेल सेयर बजारको बारेमा बताउँदै (अडियो)
प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुरु
माघ १९ गते, २०७७